I-Delivra yongeza ukuThengiswa kwe-E-Commerce kunye nokwahlulahlula | Martech Zone
I-Delivra yongeza ubuNtu kwi-E-Commerce kunye neCandelo
NgoMgqibelo, Julayi 9, 2016 NgoLwesihlanu, Julayi 8, 2016 Douglas Karr
ISebe lezoRhwebo laseMelika umbiko ukuba intengiso kwi-intanethi ibalwe ngaphezulu kwesithathu kwisambuku sokukhula kwentengiso yentengiso ngo-2015. Uphando lukwabonisa ukuba ukuthengisa kwi-Intanethi kwabalelwa kwiipesenti ezisi-7.3 zentengiso epheleleyo ngo-2015, ukusuka kuma-6.4 eepesenti ngo-2014.
Imikhankaso yokuthengisa nge-imeyile inoxanduva ngaphezulu kweepesenti ezisixhenxe Kuzo zonke iintengiselwano ze-e-commerce, ezenza ukuba zibe sesona sixhobo sokuthengisa sentengiso se-ecommerce esisemva komsebenzi wokukhangela kwi-Intanethi, oqhayisa nge-15.8 yepesenti yenqanaba lokuguqula. Ngaphandle kokusebenza kwayo, ayingabo bonke abathengisi abakwi-Intanethi abadalwe belingana ngokumalunga nohlahlo-lwabiwo mali kunye nabasebenzi.
UNeil Berman, umsunguli, kunye ne-CEO yeDelivra, kuyacaca ukuba uqoqosho lwe-e-commerce lwanamhlanje lushiya ucango luvulelekile kubanikezeli abaninzi besoftware ukuze banikezele ngempumelelo kwiimfuno zabathengisi ngaphakathi kwisithuba.
Ayisiyomfihlo abathengisi abaphezulu be-100 behlabathi abanokuthatha ezona software zinobunkunkqele kunye neerobust ezothusayo kuba banamaqela amakhulu, azinikeleyo e-commerce ukuze afunde isixa esikhulu semisebenzi yokusebenza ngokufanelekileyo. Baninzi abathengisi abakwi-Intanethi nakwingingqi ngaphandle kweqela lokuthengisa elinikezelweyo kwiimeko ezininzi. Kubalulekile ukuba aba bathengisi benze imali kwi-imeyile yempumelelo ezisa urhwebo nge-e, kodwa banesidingo seqonga elinikezela ngokubaluleka kokusebenziseka kunye nokusetyenziswa kwangoko.
Ushwankathelo loRhwebo lweDelivra
Urhwebo lweDelivra yiphakheji yamva nje evela kumboneleli wesoftware yokuthengisa kwaye inikezelwe kwintengiso ye-e-yorhwebo. Ephakathi kokudityaniswa kweMagento, Shopify, kunye neWooCommerce, iqonga lilungele abathengisi abancinci nabaphakathi be-intanethi-kunye okanye ngaphandle kokuxhasa indawo yezitena kunye nodaka-kwaye ivumela imikhankaso yentengiso yasemva kokuthengwa kwe-imeyile. I-imeyile yokuthenga inqwelo yokuthenga ikhethwe yenye yezona zinto zibalulekileyo ukusukela uphando Ibonisa ukuba iipesenti ezingama-60 zee-imeyile ezishiyiweyo zivelisa ingeniso, uninzi lwazo lusenzeka kwiiyure ezingama-24 zokuqala ze-imeyile ezithunyelwayo.
Isoftware yokwenyani yokuthenga inqwelo yokuthenga inceda abathengisi abakwi-Intanethi ekukhuthazeni ukunikezelwa kwemveliso, ukuphucula amava abathengi, kunye nokumaketha kwakhona kubathengi kuzo zonke ii-imeyile ezizezakho. Urhwebo lweDelivra yenza ukuba abasebenzisi bazenzele ngokuzenzekelayo iziqendu ngokusekwe kwidatha yokuthenga evumelanisiweyo Magento kwaye WooCommerce iindidi, okanye Shopify Iindidi zemveliso, ukuthengisa ngokuthengisa imveliso kunye nokuzibandakanya kwakhona kubathengi bangaphambili. Ukongeza, abasebenzisi banokulandela umkhondo wengeniso kwi-imeyile ukwenza isicwangciso sokuthumela ngeposi kwaye bathumele ngokulula imiyalezo yenqwelo yokulahla ukuze bafumane ingeniso enokubakho kunye nokwandisa ukuthengisa nge-imeyile i-ROI.
Ukudityaniswa kwenqwelo yokuthenga yomsebenzisi ethile kuvelisa iziqendu ezizenzekelayo ngokusekwe kukuthengwe kwiindidi zeqonga okanye iintlobo zemveliso.
Urhwebo lweDelivra Abasebenzisi banokwenza iziqendu zabo ukuba zisetyenziselwe ukwenziwa rhoqo, ukuvavanywa kovavanyo, kunye nokuxhonywa kwemeyile. Imizekelo yamacandelo ibandakanya:
Ukusetyenziswa kwedatha yeenqwelo ezilahliweyo ukwenza ifayile ye- kubangela isaziso sokuposa
Ukusetyenziswa kwedatha yoku-odola kwi uthengise nezinye iimveliso
Ukusetyenziswa kwedatha yoku-odola oza kuyicela ukuhlolwa kwemveliso
Olunye uphawu oluphambili kukukwazi ukwenza "umcimbi ophawulweyo" ngokusekwe kuthengiso oluthunyelwe ngeposi, ukuvumela abasebenzisi ukuba "basete kwaye balibale" amaphulo azenzekelayo ngelixa ulawula ixesha kunye nomyalezo wonxibelelwano olunxulumene nezorhwebo. Iminyhadala ephawulweyo ivumela umthengisi ukuba avavanye iikhrayitheriya, kwaye isebe inyathelo lokuhamba komsebenzi kwiindlela ezimbini. Umzekelo, umthengisi unokukhetha ukuphonononga ukuba ingaba umamkeli uyivulile i-imeyile, ucofe kwikhonkco elithile, ethengwe kwivenkile ye-e-commerce, njl. kumamkeli, ngokusekwe kwisenzo sangaphambili somamkeli okanye ukungasebenzi. Umthengisi unokukhetha ukuthumela ii-imeyile ezahlukeneyo, ukuhlaziya iinkalo zedatha okanye ukuthumela imiyalezo yeSMS.
Urhwebo lweDelivra ikwabandakanya nokudityaniswa kunye Uhlalutyo lwe-ecommerce kaGoogle. Ukuhambisa idatha kwiGoogle Analytics, olu manyano luvumela abasebenzisi ukuba bafikelele kwiimethrikhi eziphambili ezinje ngengeniso, ukuthengwa kunye namaxabiso okuguqula, kunye nendlela ekubhekiswa ngayo kuthumelo ngalunye kunye ne-imeyile iyonke. Ukongeza ukudityaniswa kukaGoogle kuhlalutyo, iimeta zokuthumela ngeposi zikwachaziwe kwiifomathi ezichaza ukujongwa kweakhawunti, ukujonga konke ukuthumela ngeposi, ukulandelela amanani, amanani ezinto ezithunyelwayo kunye nokuthelekisa ukuthumela.
Ukuqala ngokusebenza ngamandla kweDelivra Commerce yinkqubo ekhawulezayo yabasebenzisi abatsha nabakhoyo. Nokuba uphucula okanye uqala iakhawunti yabathengi, iDelivra inokuvumelanisa iqonga kunye nedatha yenqwelo yomthengi malunga neyure enye.
tags: ishiye i-imeyile yenqwelodelivraDelivra urhweboimeyile ye-ecommerceemailUhlalutyo lwe-ecommerce kaGoogleMagentoimeyile ye-magentothengaIvenkile imeyilii-imeyile ebangelawoocommerceimeyile woocommerce
I-Dynamic Evolution yoQeqesho iyaqhubeka
Intsomi ye-DMP kwintengiso